काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाको शिक्षामा मनलाग्दी, काम नगर्नेलाई पुरस्कार, काम गर्नेलाई सरुवा « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
धुलिखेल, २१ कातिकः काभ्रेको अति दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने महाभारत गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा मनलाग्दी गर्न थालेको छ । पछिल्लो पटक गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा रहेको भैरव माविका प्रधानाध्यापक खुबनाथ दुलाललाई अनावश्यक सरुवा गरेपछि पालिका प्रमुख कान्छालाल जिम्बा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मान बहादुर बरालको नियत प्रष्ट भएको हो ।
पालिका अध्यक्षको मिलेमत्तोमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हिजो एक पत्र मार्फत विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई समेत कुनै जानकारी नगराई भैरव माविबाट सरुवा गरेको प्रधानाध्यापक दुलालले बताउनुभयो । दुलाललाई सोहि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित जनकल्याण प्राथमिक विद्यालय, गोलडाँडामा सरुवा गरिएको छ । दुलालको सरुवा बारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफुलाई एक शब्द पनि नसोधेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जिम्बाले बताउनुभयो । ‘यो प्रशासनिक कुरा हो, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले मलाई प्रशासनिक कुरामा टाउको नदुखाउनु अध्यक्ष ज्यू, पालिकाभित्रका कुन कर्मचारीले कति राम्रो र कति नराम्रो काम गरेको छ, त्यो अनुसार म ब्यहार गर्छु भन्नु भएको छ, अध्यक्ष जिम्बाले भने ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले शिक्षा शाखा प्रमुख समेत नभएको मौका छोपेर प्रधानाध्यापक दुलाललाई सरुवा गरेका हुन् । गाउँपालिकाभित्र अन्य कुनै पनि प्रधानाध्यापकको सरुवा गरिएको छैन । तर बरालले शिक्षा ऐन तथा महाभारत गाउँपालिकाको विद्यालय शिक्षा सञ्चालन ब्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि २०७४ को हवाला दिदँै सरुवा गरेको पत्रमा भनेका छन् । सरुवाका बारे थप बुझ्न खोज्दा बरालले पालिकाको छुट्टै शिक्षा ऐन बनेको र कार्यविधिको आधारमा सरुवा गरेको भन्दै अन्य कुरा टेलिफोनमा गर्न नसक्ने जवाफ दिए ।
प्रधानाध्यपाकलाई सरुवा गर्नुको कारण
भैरव माविलाई अहिलेको यो अवस्थामा पुर्याउन प्रधानाध्यापक दुलाललाई ठूलै योगदान गरेका छन् । डाँडापारीक्षेत्रकै पहिलो एसएलसी सेन्टर सञ्चालन देखि अहिले गाउँमै बाली विज्ञान विषयको पठनपाठन गराउन पनि दुलालले निकै पहलमा गरे । अहिले बाली विज्ञान अन्तर्गत कक्षा १० मा ४२ र ९ कक्षामा ३० विद्यार्थी छन् ।
टेकराज घिसिङ पनि भैरव माविकै शिक्षक हुन् । उनी २०७२ अघि खानीखोला गाउँपालिकामा बालविकास दरबन्दीमा कार्यरत थिए । पछि उनलाई भैरव माविमा निमावि तहको अग्रेंजी विषय पढाउन लगियो । घिसिङ त्यस्ता शिक्षक हुन् । जो आफैले पढाउने विद्यालयमा पढे बिग्रिइन्छ भनेर बालबालिकालाई भड्काउने काम गर्थे ।
हरेक महिना विभिन्न बहानमा विद्यालयलाई कुनै जानकारी हिड्ने घिसिङका विषयमा लिएएको निर्णय नै प्रधानाध्यापक दुलालको सरुवाको कारण बनेका छन् । विद्यालयको तलब खाने तर नपढाउने भएपछि विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको बैठक घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोध्यो । घिसिङलाई पटक पटक लिखित र मौखिक स्पष्टिकरण लिइएको छ ।
घिसिङ २०७६ साल चैतमा भएको कक्षा आठको परीक्षामा समेत सहभागि नभएको पाइएको छ । परीक्षामा नखटिएको कारण समेत घिसिङले नखुलाएपछि विद्यालय ब्यवस्थापन समिति र इलाका प्रहरी कार्यालयको रोहवरमा छलफल भयो । तर निष्कर्ष कुनै निस्किएन, लगत्तै लकडाउन सुरु भयो । विद्यालय बन्द भयो ।
तर असोज देखि विद्यालय खुल्यो । फेरी छलफल भयो । उनले कुनै जवाफ दिएनन् । उल्टै विद्यालयहरुलाई भड्काई रहे । त्यसपछि विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले असोजसम्म आइपाइ आएको सम्पुर्ण तलब भत्ता दिने र हाजिर नगराउने निर्णय गर्यौ । विद्यालय त्यो निर्णय महाभारत गाउँपालिकालाई पनि पठायो । शिक्षक घिसिङलाई पनि विब्यसले गरेको निर्णय सुनाउँदै गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्न भनियो ।
त्यसपछि कात्तिक १९ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मान बहादुर बरालले प्रधानाध्यापक खुबनाथ दुलाल फोन गरेर निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिए । दुलाल विब्यसको निर्णय आफुले उल्टाउन नक्सने र विद्यालयमा ती शिक्षकलाई राख्द शिक्षा थप खस्ने जवाफ फर्काए । त्यसैको भोली पल्ट कात्तिक २० गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले दुलाललाई सरुवा गरेको पत्र पठाइदिए ।
पालिका प्रमुख जिम्बाको मिलेमत्तोमा दुलालसँग ब्यक्तिगत रिसिइबी साध्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले पत्रपठाएको स्रोतको दाबी छ । पालिकाले विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, वडा कार्यालय र सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई समेत कुनै जानकारी नगराइ सरुवाको पत्र थमाएको हो ।
पालिका अध्यक्ष जिम्बासँगको टेलिफोन कुराकानीमा दुलालमाथिको सिर प्रष्ट देखिन्थ्यो । ‘शिक्षाको कर्मचारी गाउँपालिकामा पठाएर के गर्ने ? मान्छेको जागिर खाइदिन मिल्छ ? जागिरको म्याद नथप्ने भनेको के हो ? अध्यक्ष जिम्बाले भने ।
तर दुलालले भने आफुले कसैको जागिर नखाइदिएको, बरु नपढाउने शिक्षकलाई दण्डीत गर्न खोज्दा आफ्नो सरुवा गरेको दाबी गर्नुभयो । ‘म डाँडापारी जस्तो विकट क्षेत्रमा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई गुणात्मक बनाउने उद्देश्यले लागि परेको थिए, नपढाउने, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक बीच गुटबन्दी गर्ने शिक्षकलाई विब्यसले कारबाही गरेको हो, तर पालिका अध्यक्षले पूर्वाग्रहि ढंगबाट सरुवा गर्नुभयो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेर ।’